Torohevitra ho an'ny mpitsidika amin'ny raharaham-barotra tonga amin'ny e-Visa any India
Torohevitra ho an'ireo mpitsidika raharaham-barotra karana tonga amin'ny Visa any India (eVisa India)
Ny Governemanta Indiana dia manome kilasy visa elektronika na e-Visa India ho an'ireo mpitsidika raharaham-barotra. Eto izahay dia mandrakotra ireo torohevitra tsara indrindra, torolàlana ho an'ny fitsidihanao India rehefa tonga amin'ny dia ara-barotra Business e-Visa Indiana (Visa ho an'ny orinasa indianina na eVisa India).
Ny governemanta India dia nanamora ny fividianana ny E-Visa an-tserasera Indiana (Indian Business Visa na eVisa India) izay afaka dia dingana elektronika amin'ny famenoana ny Taratasy fangatahana e-Visa Indiana
Miaraka amin'ny fisian'ny fanatontoloana sy ny fiakaran'ny Outsourcing, mankany India, nanjary fahita matetika ny olona maro tonga eto mba hanao raharaham-barotra sy hanao kaonferansa. Raha manana dia any India ianao izay atahoranao fa matahotra ianao noho ny tsy fahazoana antoka amin'ny fitsidihana firenena hafahafa, dia tokony hiala sasatra mora ianao aorian'ny famakiana ny sasany amin'ireo torohevitra mahasoa sy torohevitra hafa amin'ny fitsidihanao India. .
Misy raharaha azo ampiharina izay tsy maintsy karakarainao alohan'ny hahatongavanao ary raha miomana tsara amin'ny fijanonanao any India ianao ary manaraka torohevitra vitsivitsy dia ho vonona hanao dia lavitra ianao ary koa hijanona tsara any India, izay firenena manana stereotypes be dia be momba azy nefa tsy misy afatsy ny mafana sy mandray.
Alaharo araka ny filaharany ny antontan-taratasinao
Ny zavatra voalohany tokony hataonao rehefa mikasa ny mitsidika an'i India hanao dia amin'ny raharaham-barotra dia alamino ny pasipaoronao ary mangataka amin'ny Visa any India (e-Visa India Online). Mora dia mora izany ankehitriny satria ny Governemanta India dia nanolotra e-Visa indiana izay azo ampiharina amin'ny Internet nefa tsy mila mankany amin'ny Masoivohon'i India na Consulat India ary handefa azy ireo antontan-taratasy. Ho an'ny dia raharaham-barotra dia mila e-Visa Business India ianao (e-Visa India Online). Ny fomba fampiharana ny fampiharana izany dia amin'ny Internet tanteraka ary tena mora tokoa. Ny hany ilainao mba hahazoana ny Visa any India dia mahafeno ny fepetra takiana amin'izany ary manolotra kopia ny pasipaoronao sy ny antontan-taratasy misy tsipiriany momba ny dia ataonao. Tokony hampihatra farafahakeliny 4-7 andro mialoha ny sidinao mankany India ianao ary raha haingana dia azo atao. Azonao atao ny mahazo ny kopian'ny elektronika ny Visa Visa ao anatin'ny 4-7 andro izay azonao itondrana azy, na amin'ny pirinty any amin'ny seranam-piaramanidina miaraka aminao miaraka amin'ny pasipaoronao.
Mandehana mamaky ny Fepetra takiana amin'ny e-Visa Indiana ary Fepetran'ny pasipaoro e-Visa Indiana, mba hampihenanao ny mety ho fandavana ny Visa any amin'ny Internet amin'ny Internet ho an'ny Orinasa (Indian Business Visa na eVisa India).
Vaksiny sy fahadiovana
Ny mpitsangatsangana any amin'ny firenena dia asaina manao izany mahazo vaksiny mahazatra mahazatra alohan'ny hitsidihany ny firenena satria mety hiharan'ny areti-mifindra sasany ao amin'ny firenena izy ireo na mety hitondra aretina sasany amin'izy ireo any amin'ny firenena izay tsy misy atiny. Noho izany, rehefa tonga any India ianao dia asaina mahazo vaksinina sasany. Ireto misy: Vaksinin'ny kitrotro-mumps-rubella (MMR), vaksinin'ny Diphtheria-tetanus-pertussis, vaksinin'ny varicella (cacarà), vaksinio polio, tifitra gripa fanao isan-taona, ary tokony hitondra fanafody ihany koa ianao hisorohana ny tazomoka ary koa fanafody moka. fanosotra.
Tsy tokony hilefitra amin'ny stereotype momba an'i India ianao ary hihevitra fa tsy ho madio ara-pahasalamana ny zava-drehetra. Azo antoka fa tsy izany ny zava-misy, indrindra any amin'ny trano fandraisam-bahiny misy kintana 4 sy kintana 5 izay hipetrahanao sy ireo birao izay anaovanao ireo fivorianao. Satria mety hafana kokoa ho anao ny toetr'i India, mijanona ho hydrated fa alao antoka fotsiny rano tavoahangy ihany no hosotroinao ary manana sakafo avy amin'ny toerana atolotry ny mpiara-miasa aminao. Halaviro ny sakafo masiaka raha tsy mahazaka zava-manitra be dia be ianao.
Fitetezana ny tanàna
Betsaka ny olona mivezivezy amin'ireo tanàna any India amin'ny alàlan'ny fitateram-bahoaka toy ny metro na ny fiaran-dalamby na ny posiposy fiara aza, fa ny taxi-be mialoha dia lavitra no safidy tsara indrindra. Raha ny marina, mba hahamora ny tenanao dia tokony mandeha amin'ny taxi ihany. Mety ho mora ampiasaina koa ny fanananao ny fampiharana Google Maps amin'ny telefaoninao. Toy ny a fampiharana fandikan-teny google, raha tokony hahita ny tenanao amin'ny toe-javatra ilanao izany ianao. Hamarino tsara fa nanakalo ny volanao ianao ary mitondra vola indiana miaraka aminao.
Ho fantatrao tsara ny fomba fitondrana ny orinasanao fa misy sosokevitra vitsivitsy mety hitanao fa mahasoa dia voalohany indrindra, avelao ny fitongilanao momba an'i India sy ny olony ao aoriany ary mirotsaka amin-kafanam-po amin'ireo olona izay mety hampiseho fahaiza-mandray olona betsaka. Ento ny antontan-taratasinao miaraka aminao. Adiresy amin'ny mpiara-miasa aminy ny anarany, izay tokony ezahinao tononina tsara fa raha tsy azonao atao dia azonao atao ny miantso azy ireo ho Andriamatoa na Miss na tompoko na maman. Miakanjoa ara-dalàna amin'ny fivorianao na dia afaka mandeha semi-formal aza ianao raha vao manomboka amin'ny tanora kokoa. Ambonin'ny zava-drehetra, miezaha mitady namana amin'ireo mpiara-miasa aminao ary mandany fotoana iray iarahana amin'izy ireo. Hanampy anao amin'ny tambajotra izany ary hikolokolo fifandraisana ara-barotra tsara ary hahafantatra bebe kokoa momba ny kolontsaina iray hafahafa sy vaovao aminao.
Ataovy ny fikarohana kely nataonao momba ilay toerana tianao haleha. Ny toerana rehetra any India dia mety ho samy hafa be amin'ny iray hafa ary ny fifandraisan'ny kilasy dia manome antoka ihany koa fa ny faritra sasany amin'ny tanàna tsirairay dia tsara kokoa noho ny hafa, ary koa mitazona ny tsy fitoviana eo amin'ny habakabaka sy ny ambanivohitra. Miezaha hamaky ny kolontsaina India sy ny fahasamihafana ara-poko sy ara-pitenenana ary fantaro fa handeha ao a firenena sarotra kolontsaina sy manankarena.
Maherin'ny 180 ny zom-pirenena azo ekena amin'ny e-Visa Online Indiana. Etazonia olom-pirenena, Citizens UK, Australian olom-pirenena, olom-pirenena New Zealand, olom-pirenena kanadiana, olom-pirenena soedoà, olom-pirenena Soisa ary Belza olom-pirenena eo amin'ireo firenena hafa izay afaka mangataka amin'ny e-Visa an-tserasera.
Raha mikasa ny hitsidika an'i India hanao dia lavitra ianao, dia azonao atao ny mangataka izany Business e-Visa Indiana (Indian Business Visa na eVisa India) an-tserasera eto ary raha mila fanampiana ianao na mila fanazavana, aza misalasala mifandray Birao fanampiana sy foibe fifandraisana amin'ny e-visa Indiana ho fanohanana sy fitarihana.